Labada Manchester oo Real Madrid iyo Barcelona kula dagaallamaya difaac ka ciyaara Serie A – Gool FM
(Italy) 17 Maaajo 2020. Kooxaha Manchester United iyo Real Madrid ayaa kula soo biiray Manchester City iyo Barcelona loollanka loogu jiro saxiixa difaaca kooxda Inter Milan ee Milan Skriniar.
Difaaca reer Slovakia ayaa loo arkaa hanti qaali ah oo suuqa kala iibsiga laga heli karo, waxaana isa soo taraya kooxaha doonaya adeeggiisa.
Sida laga soo xiganayo Daily Mirror, Manchester United ayaa Skriniar ka dhiganeysa bartilmaameedkeeda koowaad ee difaaca suuqan xagaaga, kaddib markii uu adkaaday dagaalka loogu jiro saxiixa xiddiga kooxda Napoli ee Kalidou Koulibaly.
Lacag gaareysa illaa 60 milyan oo euro ayaa lagu qiimeeyaa difaacii hore ee Sampdoria, waxaana qandaraaska uu Inter kula jiro dhici doonaa Juun 2023.
Nerazzuri ayaa 34 milyan oo euro Skriniar kaga soo iibsatay kooxda Sampdoria sanadkii 2017, waxaana uu ka mid yahay halbowlayaasha difaaca ee shaxda Macallin Antonio Conte.
Marka laga soot ago Man United, Real Madrid ayaa sidoo kale u xusul duubaneysa inay la soo wareegto difaacan dhexe.
Si kastaba ha ahaatee, Manchester City iyo Barcelona ayaa bilihii la soo dhaafay xiiseynayay 25-jirka difaaca ka ciyaara, balse ma jirin koox soo bandhigtay dalab muhiim ah oo gaaraya 40 milyan oo euro.